Ukudibanisa njani iiAkhawunti zeTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 278
Iinethiwekhi zentlalo zezona ndawo zixakekileyo kwi-cyberpace. Abantu bayifikelela ukuze bahlale benxibelelana nabahlobo kunye neentsapho zabo. Ngokunjalo, lolona hlobo lubalulekileyo lokuzonwabisa olukhoyo, ngakumbi ngenxa yesantya esanda ngokukhawuleza ekuhlaziywa ngaso imixholo.
Ukusasazwa kopapasho kwezi nethiwekhi kuhlala kuyinto evakalayo, ngakumbi kuTwitter, apho inani leeTweets lifikelela ngaphezulu kwezigidi ezingama-500 yonke imihla. Kwaye ngamanye amaxesha abasebenzisi baneeakhawunti ezininzi zokupapasha umxholo wabo. Ukulawula ezi akhawunti, iqonga lenze icandelo lokuzibandakanya.
Ukudityaniswa kweakhawunti yinkqubo eluncedo kakhulu yokulawula iiakhawunti ezininzi ngaxeshanye. Kwi-Twitter oku kwahluke kancinci phakathi kweApp kunye newebhusayithi. Landela le miyalelo ingezantsi:
Sebenzisa iwebhusayithi ye-Twitter
Ngena kwiakhawunti yakho usebenzisa i umsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Skrolela ezantsi kwiakhawunti yakho, kwicala lasekhohlo lojongano, apho uya kufumana khona ifoto yakho yeprofayile. Lo mfanekiso uza kuhamba kunye negama lakho kunye negama lomsebenzisi.
Uya kubona i-ellipsis ezintathu xa ucinezela ukubonisa iindlela ezimbini onokukhetha kuzo: "yongeza iakhawunti esele ikho ”kunye no“ phuma”Ikhatshwa ligama lomsebenzisi.
Fikelela kukhetho lokuqala. Iwindow iya kuboniswa kwicala eliphambili lesikrini kunye neebhokisi ezininzi. Kowokuqala ukusuka phezulu kuye ezantsi uya kubeka ifowuni, i-imeyile okanye igama lomsebenzisi le-akhawunti.
Kwesibini uya kubeka igama eligqithisiweyo leakhawunti. Apha ngezantsi kwebhokisi, ukhetho luya kubakho "Uyilibele iphasiwedi?"
Sebenzisa usetyenziso lweTwitter
Ngena kwi-Twitter usebenzisa eyakho igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha
Cofa kumfanekiso weprofayile yakho ngasekunene kwesikrini, kumbono apho ufumana ixesha.
Nje ukuba uyicinezele, kuya kuvela imenyu kwicala lasekhohlo lesikrini. Into yokuqala oza kuyibona yifoto yakho yeprofayile kunye negama lomsebenzisi ukusuka phezulu ukuya ezantsi kuloo menyu. Okulandelayo uza kufumana uphawu lokudibanisa (+).
Cinezela le yokugqibela ukubonisa icandelo "Iiakhawunti". Apho iakhawunti ezimanyeneyo ziya kuvela. Uya kufumana ukhetho "yongeza iakhawunti esele ikhona". Xa ucinezela, elinye icandelo liya kuboniswa ukuze ufake idatha yenye iakhawunti.
Ukongeza uya kufumana ukhetho "Phuma kuzo zonke iiakhawunti."
Uya kufumana iibhokisi ezifanayo ukubeka inombolo, i-imeyile okanye igama lomsebenzisi. Kunye nebhokisi yokufaka iphasiwedi. Ngokufanayo, uya kufumana ukhetho lokufumana kwakhona iphasiwedi.
Sebenzisa abaphathi beendaba zosasazo.
Kwiwebhu uyakufumana izixhobo eziza kukunceda ulawule iiakhawunti ezininzi ngaxeshanye. Ngale nto uneHoosuite, iBuff, phakathi kwabanye. Ukusetyenziswa kwayo kulula kakhulu ukuwenza. Konke okufuneka ukwenze kukudibanisa iiakhawunti zakho nokusetyenziswa kokhetho lwakho kwaye uqalise ukuyila ushicilelo.
Xa iimpapasho sele zilungile, ukhetha amaqonga apho ufuna ukuwapapasha khona kwaye ucwangcise ixesha lokwenza njalo.
1 Sebenzisa iwebhusayithi ye-Twitter
2 Sebenzisa usetyenziso lweTwitter
3 Sebenzisa abaphathi beendaba zosasazo.
Ungayisebenzisa njani i-TweetDeck Teams kwi-Twitter?